Montenegro: Dochie Ọchịchị Ọchịchị na Gọọmentị nke Ndị Ọkachamara
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Montenegro: Dochie Ọchịchị Ọchịchị na Gọọmentị nke Ndị Ọkachamara
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Montenegro • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Na Montenegro, ndị mmegide meriri na ntuli aka na Sọnde, ndị obodo Montenegro ga-enwe gọọmentị ọhụrụ. Ndị otu na-achị achị chịrị afọ iri atọ.
"Isi okwu a bụ na otu n'ime usoro ọchịchị onye kwuo uche ya ikpeazụ na Europe agbanweela na ntuli aka nke udo, nke a na-adịghị ahụkebe na-echebara ike ọgwụgwụ akụ na ụba nke mba na gọọmentị nke na-agaghị ekwe omume ịgbanwe kemgbe ọtụtụ iri afọ. Aleksandra Gardasevic-Slavuljica, Onye isi ala iwughari. njem mu Balkan na Hon. Onye nnọchi anya Seychelles.
O kwukwara, sị: “Olileanya, ihe nile ga-agbanwe dịka echi. Gọọmentị akwadoghị nsonaazụ nke ntuli aka ahụ, mana ha kwuru na onye ọ bụla meriri ọtụtụ, kwesịrị ịkwado ndị ọzọ. Ha kwuru na ha ga-echere nsonaazụ nsonaazụ nke Kọmịị Na-ahụ Maka Ntuli Aka na steeti kwupụtara. Nke a nwere ike ịdịru ụbọchị ole na ole mana enwere olile anya na ọ ga-ebi n'udo. ”
Onye nyocha si Montenegro gwara eTurboNews: “Ha enweghị ike ime ihe ọ bụla iji gbanwee uche ndị mmadụ. Echere m na n'ime ụbọchị ole na ole [ọnọdụ] ga-apụta ìhè. ”
Aleksandra kwuru, sị: “Pasent ndị ahụ ziri ezi. Agbanyeghị, 'Maka Ọdịnihu nke Montenegro' bụ njikọ mmegide kachasị ukwuu, ọ bụghị naanị nke ndị Serbs. E nwere nnọkọ 7-8 na ya. Nnukwu bụ pro-Serb, ma ụfọdụ ndị ọzọ abụghị. Ewezuga njikọ mmegide a, enwere ndị mmegide mmegide abụọ na-asọ mpi ma ha nwere mba dị iche iche bi na Montenegro: Montenegrins, Bosnians, Serbs, Albanians, Croatians. Mkpakọrịta abụọ a bụ nnọkọ obodo. Ọbụna onye ndú nke otu n'ime njikọ aka obodo bụ onye Albanian. ”
Ọzọkwa, gbasara ọtụtụ ndị omeiwu (oche 41), enweghị nsogbu ọ bụla n'ihi na oge niile n'oge mkpọsa ahụ, ndị mmegide ndọrọ ndọrọ ọchịchị 3 a gosipụtara na n'ikpeazụ, ha ga-agakọ ma mepụta gọọmentị. Nke a bụ ihe ndị isi atọ niile kwadoro n'abalị a. Yabụ, enweghị obi abụọ banyere ọchịchị ọdịnihu. Ha kwukwara n'ụzọ doro anya na gọọmentị ga-abụ ndị ọkachamara, ọ bụghị ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nke dị mma. "
Aleksandra chere, sị: “Ọ dị njọ na Reuters akọwaghị nkọwa ndị a niile.”
Reuters kọrọ, sị: "Na ndabere nke 100% nke ballots si a sample nke ntuli aka ọdụ, CEMI buru amụma na DPS nwetara ala 34.8% nke votu, mgbe mmekorita nke tumadi Serb nationalist ọzọ," N'ihi na ọdịnihu nke Montenegro, "nke chọrọ nso. agbatị na Serbia na Russia, dị n'azụ na 32.7%. Ebe ọ bụ na nke abụọ n'ime ndị na-azọ ọkwa abụọ ga-echekwa ndị nnọchi anya iri anọ na otu n'ụlọomeiwu oche iri asatọ na otu chọrọ ịchị naanị ha, ha ga-achọ ndị mmekọ ọnụ. "
Ntuli aka ndi mmadu di elu, na 75% nke ndi nhoputa aka na-aga ntuli aka, ihe ato ato kariri na 3, na ihe 2016 kariri na nhoputa ndi ochichi nke 11.
Montenegro nọ na-enwe ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị kemgbe Disemba afọ gara aga, mgbe ndị DPS kachasị nakweere Iwu na-agbagha n'okpukpe, nke na-emegide Chọọchị Ọtọdọks nke Serbian, bụ nke kpọrọ ndị otu ya ka ha votu megide DPS. Njikọ aka gburugburu Democratic Front yiri ka ọ ritela uru karịa na iwu nke iwu kpatara. DPS ahụkwala ngagharị iwe nrụrụ aka dị egwu na 2019.
Aleksandra kwubiri, sị: “Ugbu a, ndị otu ahụ ka nọ n'ọchịchị kwesịrị ịnakwere mfu ahụ, na olile anya, ha agaghị emepụta aghụghọ ọ bụla. Dị ka anyị niile maara, ha [arụwo] ọrụ ọtụtụ iri afọ na ntọala aghụghọ. Ya mere, enwere m olile anya na ha ga-ekweta na ntuli aka etufula ha. Ezi mmetụta… nwere olile anya na anyị ga-ebi na mba nwere onwe ya ngwa ngwa."
CeMI na Center for Democratic Transition, bụ ndị lekọtara ụbọchị ntuli aka ahụ, ekpesala ọtụtụ nrụrụaka.